सुत्ने बेला सिरानी मुनी तुलसीको ५ पात राख्नुस अनि हेर्नुस चमत्कार ! – AB Sansar
सुत्ने बेला सिरानी मुनी तुलसीको ५ पात राख्नुस अनि हेर्नुस चमत्कार !
September 26, 2020 adminLeaveaComment on सुत्ने बेला सिरानी मुनी तुलसीको ५ पात राख्नुस अनि हेर्नुस चमत्कार !
काठमाडौ । तुलसी एउटा विरुवा मात्र होइन यसको वहुउपयोगी गुण छ । औषधीय गुणका रुपमा तुलसी जति महत्वपूर्ण छ धार्मीक रुपमा पनि हिन्दु धर्ममा निकै पवित्र मानिन्छ । हिन्दु धर्ममा तुलसी बिना धर्म संस्कार पनि पुरा हुँदैन । विज्ञानले समेत तुलसीको फाइदाका बारेमा धेरै कुराहरु पुष्टि गरिसकेको छ । तुलसी धेरै रोगको औषधीका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । तुलसीले चिसो, रुघा खोकी र सास सम्बन्धि रागे लगायतमा औषधीका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । **तस्बिर ***सुदुर समाज *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
कोरोनाको समयमा अहिले नेपालीको धेरै जसो भान्छामा तुलसीको पात प्रयोग हुने गरेको छ । औषधीको गुणले भरपूर्ण तुलसीको पात राखेर पकाएको पानी खाँदा पनि रुघा खोकी लगायत समस्या समाधान हुन्छ ।शरद ऋतुभर सबै प्राणीका लागि तुलसीलाई महाऔषधि मानिन्छ। यी बाहेक अन्य पनि धेरै छन् तुलसीका फाइदाहरु रहेका छन् । राति सु त्ने समयमा सिरानी मुनि तुलसीको पाँच पात राखेमा तपाइँको जीवनमा धेरै परिर्वतन आउन सक्ने धर्मशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
रातको समय सिरानी मुनि राखेका तुलसीका पाँच पातले दिनभरको त’ना’वलाई हटाउनेछ । यसको साथै दिमागले पनि शान्त भएर काम गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तो गर्दा तपाइँभित्र भएको नकरात्मक शक्ति हटाउँनेछ र व्यापारमा पनि धेरै बढोत्तरीव हुने विश्वास गरिन्छ । तुलसीको पातले छाला सम्बन्धि समस्या पनि कम गर्छ । अनुहारमा भएको खिल निकालेर धेरै चमक दिन्छ । तुलसीको फुल र पातले महिलालाई हुने महिनावारी गडबडीको समस्या पनि हटाउँछ । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
बिद्यार्थीहरुलाइ भर्खरै आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना !
Breaking News: चिनले भर्खरै तोक्यो कोरोना भ्याक्सिन बजारमा आउने मिति
राहुल र स्मिताको पुनर्मिलन भएपछि एक समाजसेवि युवा आ,क्रोशित भए, सबैलाई कडा चुनौती दिदै मिडियामा(भिडियो सहित)
February 7, 2021 Ab-संसार
३० वर्षीया सीता लोप्चनले जन्माइन पाँच किलोको बच्चा !
February 15, 2021 Ab-संसार
February 21, 2021 Ab-संसार
तीनतले अन्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग सहितको नयाँ धरहरा: April 22, 2021
म,र्नु अघि ७ वर्षीया बालकको अन्तिम वाक्य, ‘भो बुवा अब ख’प्न सक्दिनँ’ April 22, 2021
परिक्षा मुखैमा आउनै लाग्दा कक्षा १०,११ र १२ का विद्यार्थी हरुलाई एका भखरै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! April 22, 2021
यिनै हुन् कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी नर्स अनिशा, ३ महिनाकी छोरी बनिन टुहुरी April 22, 2021
दिल्लीबाट घर फर्किने क्रममा सुदूरपश्चिमका एक जनाको बाटोमै मृत्यु April 21, 2021
Mobile : +9779848447248